Posted By: KongoLisolowaa: Sebtember 26, 2020 00: 30 No Comments
Waxaa la yiri waxay ku dhalatay qiyaastii 1820, malaha Haiti iyo si ka sii saxan gudaha Jacmel; atariishada, waxay ka qabatay doorar yar magaalada Paris 1838 iyo 1839 tiyaatarka Porte-Saint-Antoine. Jeanne ayaa markaa ku xidha Nadar. Kulankii Baudelaire wuxuu dhacay gugii 1842, laga yaabee in Faubourg-Montmartre. Jeanne waxay u guurtay 6 rue de naag-la'aan, gudaha 'Ile-Saint-Louis, aad ugu dhow hudheelka Pimodan halka ay ku nooshahay gacaliyaheeda.
Sheekadu way dhib badan tahay, laakiin waxaa laga qiimeeyaa waraaqaha Baudelaire - kaasoo mararka qaar ka hadla inuu naftiisa u dilo nafteeda - qofku wuu qiyaasi karaa sheeko jacayl oo weyn taas oo, kala jab iyo dib u midoobid, ugu yaraan 17 sano socon doonta. Ilaa 1859, markii Jeanne uu xanuunsaday oo uu haleelay cagaarshow. Baudelaire ayaa la dhigay isbitaalkeeda.
Wali way ku noolayd Batignolles, aad ayuu u yaraaday, sanadkii 1870. Wax intaa ka badan ma ogin. Laakiin waxaa jira ereyo yar oo jacayl ah oo ka haray saaxiibkiis:
Waxaan kuu siinayaa aayadahan si, haddii magacaygu yahay
Farxad ayaa ku soo dhowaatay waqtiyada fog,
Iyo markab ay riixeen aquilon weyn,
Hal fiid ayaa maskaxda aadanaha ka dhigaysa inay shaqeyso,
Xusuustaadu, sida sheekooyinka aan la hubin,
Daaliso akhristaha sidoo kale a dulcimer,
Iyo xiriir walaaltinimo iyo mid qarsoodi ah
Remain sidii laga heesaha kibirsan aan laalaadeen,
noqon Inkaaru ha ku dhacdo kii yaamayska moolka dheer ka soo gala,
Illaa meesha ugu sarreysa cirka waxba, aniga mooyaane, uma jawaabo;
- Ô kaaga, sida hooska raadku ku sii raagayo,
Dad badan oo cag fudud ah iyo aragti deggan
Nimankii doqonka ahaa ee ku xukumay qadhaadh,
Taallo ay ku jiraan indho diyaaradeed, malaa'ig weyn oo fool fool leh!
Oct31 10: 07
HI / LO: 11/3 ℃
HI / LO: 17/10 ℃
Oktoobar 31, 2020 00: 50
Oktoobar 31, 2020 00: 45
Oktoobar 31, 2020 00: 40
Oktoobar 31, 2020 00: 30